တိုက်ရိုက် YouTube ဗီဒီယိုရှာဖွေမှု
မည်သည့် YouTube မှ အသံကို ထုတ်ယူပါ လင့်ခ်ချိတ်ပြီး ၎င်းကို YouTube မှ MP3 Converter ဖြင့် သင်ရွေးချယ်သည့်နေရာသို့ MP3 ဖိုင်များအဖြစ် သိမ်းဆည်းပါ။
YouTube အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးမှ ဗီဒီယိုအများအပြားကို MP3 ဖိုင်များသို့ စုစည်းပါ၊ ခြေလှမ်းတစ်ခုတည်းတွင်။
အွန်လိုင်းပြောင်းပေးသည့်စနစ်သည် ဤအင်္ဂါရပ်ကို ပံ့ပိုးပေးသည် တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ မပေးဘဲ။ ရိုးရှင်းစွာပင်၊ ရွေးချယ်မှုဘားကို လိုချင်သောမှတ်တိုင်နှစ်ခုတွင် ကန့်သတ်ပြီး ခဏစောင့်ခြင်းဖြင့် အချိန်ဘောင်ကို ရွေးချယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်တောင်းဆိုချက်အား ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖိုင်စာရင်းကို ချက်ချင်းပြန်ပေးပါမည်။
YouTube ဗီဒီယိုများမှ MP3 ဖိုင်များကို ဖန်တီးပြီး ၎င်းတို့ကို သင့်ထံ လွှဲပြောင်းပါ။ အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြင့် စက်ပစ္စည်း။
ရည်ရွယ်ချက်တူသော ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းအက်ပ်များနှင့် မတူဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တူးလ်သည် သုံးစွဲသူများအား ၎င်းတို့၏စက်ပစ္စည်းများတွင် မည်သည့်အရာကိုမျှ ထည့်သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို browser တက်ဘ်တစခုတည်းတွင်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ YouTube ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ ထွေထွေထူးထူးမဖြစ်သင့်ပါ၊ ဤကိရိယာကို ဒီဇိုင်းဆွဲရာတွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော ကိရိယာတွင် ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် သင့်အား ဆက်တင်များနှင့် ရွေးချယ်စရာများစွာကို အရှိန်မြှင့်နိုင်စေပါသည်။ YouTube ဗီဒီယိုတစ်ခုလုံးကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်းအပြင်၊ သင်ပြောင်းလိုသည့် ဗီဒီယို၏ မည်သည့်အပိုင်းကို သင်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ဤအဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်ချက် မလိုအပ်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ဖြတ်တောက်ရာမှာ အသုံးပြုတဲ့ တည်းဖြတ်ချိန်တွေကို ဖြတ်တောက်ရာမှာ အလွန်ကူညီပေးပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube converter မှ MP3 tool တစ်ခုတည်းတွင် bitrate ရွေးချယ်စရာများစွာကို ပေးဆောင်ပါသည်။ 64kbps မှ 320kbps အထိရှိသည်။ သင့်လက်ကိုင်စက်များအတွက် ဖိုင်သေးသေးလေးများ သို့မဟုတ် အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သော MP3 သီချင်းများကြားတွင် သင်သည် အခမဲ့ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဆိုပါရွေးချယ်မှုအားလုံး၏အသုံးပြုသူများသည် MP3 ဖော်မတ်မှပေးဆောင်သော universal လိုက်ဖက်ညီမှုမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သော အခြားသော အော်ဒီယိုဖော်မတ်များစွာလည်း ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့တွင် အသံအရည်အသွေးကို မထိခိုက်စေဘဲ အရွယ်အစားကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် MP3 ကို အစားထိုးရန် လူကြိုက်များသော ကုဒ်ဒက် M4A နှင့် Google မှ တော်ဝင်ခံစားခွင့်မရှိသော ရုပ်မြင်သံကြားဖိုင်ဖော်မတ်ဖြစ်သော WebM။
ဗီဒီယို၊ ပုံသေးနှင့် GIF အထွက်များ ကျယ်ပြန့်စွာ ရှိပါသည် ၎င်းကို ပျံသန်းရာတွင်လည်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ဖြောင့်စင်းသော User Interface
ရှိပါတယ်၊ ခလုတ်တစ်ခုစီ၏လုပ်ဆောင်ပုံကို စူးစမ်းရှာဖွေနေရန် မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်ခဲမရှိသော YouTube converter သည် MP3 သို့ မလိုအပ်သော ရှုပ်ယှက်ခတ်မှုများနှင့် ရှုပ်ထွေးနေသော အစိတ်အပိုင်းအားလုံးကို ဖယ်ရှားရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ သင်လိုချင်သော MP3 ဖိုင်များကို ချက်ချင်းရယူခြင်းဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိရိယာ၏ နောက်ကွယ်မှ စနစ်အား နောက်ဆုံးပေါ် အသစ်နှင့် တပ်ဆင်ထားပါသည်။ စက်ပစ္စည်းများနှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိဆုံး bandwidth။ အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်းရရှိရန် သင့်ဒေါင်းလုဒ်များကို ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုများစွာဖြင့် အရှိန်မြှင့်မည်ဖြစ်သည်။ လေးလံသော ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပင် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း သင့်စက်ပစ္စည်းသို့ ရောက်ရှိလာရန် ပြဿနာမရှိသင့်ပါ။
အဆင့် ၁ : သင့်ဘရောက်ဆာမှ YouTube ဗီဒီယို သို့မဟုတ် အစီအစဉ်လိပ်စာကို ကူးယူပါ။ သင်သည် မိုဘိုင်းအက်ပ်ကို အသုံးပြုနေပါက မျှဝေမီနူးရှိ “ ကော်ပီလင့်ခ် ” ရွေးချယ်မှုအား နှိပ်ပါ။ သင်သည် “Searching Box” မှတစ်ဆင့် ရှာဖွေမှုအကြောင်းအရာကို တိုက်ရိုက် ညွှန်ကြားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တူးလ်ပေါ်ရှိ ထည့်သွင်းသည့်အကွက်ထဲသို့ ဤ URL ကို နှိပ်ပြီး ၎င်းဘေးရှိ “ ယခုစတင်ရန် ” ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် ၂ :ဤ URL ကို ကျွန်ုပ်တို့၏တူးလ်ပေါ်ရှိ ထည့်သွင်းအကွက်ထဲသို့ ကူးထည့်ကာ ၎င်းဘေးရှိ “ယခုစတင်ရန်” ခလုတ်ကြီးတစ်ခုကို နှိပ်ပါ။
အဆင့် ၃ : စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက်၊ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီအတွက် ရနိုင်သောဘစ်နှုန်းများစာရင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာဒေါင်းလုဒ်ခလုတ်များကို သင်တွေ့ရပါမည်။ MP3 ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲခြင်းထက် ကျော်လ��န်လုပ်ဆောင်ရန် အခြားရွေးချယ်စရာများကို စစ်ဆေးရန် အခြားတက်ဘ်များကို နှိပ်ပါ။ သင်နှစ်သက်သော ဖော်မတ်ကို ရွေးပါ။
အဆင့် ၄ : သင့်စက်ပေါ်ရှိ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်မည့်နေရာကို ရွေးချယ်နိုင်စေမည့် ဒိုင်ယာလော့ဂ်တစ်ခု ပေါ်လာပါမည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ပြီးအောင်စောင့်ပါ။ ပြီးတော့ voilà၊ သင်အလိုရှိသော အသံဖိုင်ကိုဖွင့်ရန် သင့်ကိုစောင့်ကြိုနေပါသည်။
MP3download.to ဖြင့်၊ သင်သည် YouTube ဗီဒီယိုများကို MP3 အဖြစ်သို့ ပြောင်းနိုင်ပြီး၊ ထို့နောက် YouTube ဗီဒီယိုများကို ပြောင်းပြီးနောက် MP3 ဒေါင်းလုဒ်လုပ်သူအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ငါပြောင်းလဲပြီး ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်တဲ့ ဖိုင်အရေအတွက် ကန့်သတ်ချက်ရှိသလား?
အသုံးပြုသူ တစ်ဦးတည်း ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သော ဖိုင်အရေအတွက်နှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုသည် ကန့်သတ်ချက်မရှိပေ။ ၎င်းသည် သင့်အား YouTube အစီအစဉ်များကို MP3 သို့ ပြောင်းရန်ပင် ခွင့်ပြုပါသည်။ YouTube အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကို သိမ်းဆည်းရန်၊ အသစ်တစ်ခုမလုပ်ဆောင်မီ သင့်လက်ရှိတောင်းဆိုမှုကို အပြီးသတ်ရန် စောင့်ရုံသာဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ဆောင်ရန်မှာ တူညီသောအဆင့်များကို ပြန်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
ဤအဖြေအတွက် တိကျသောအဖြေတစ်ခု ထုတ်ရန် ခက်ခဲသည်။ ၎င်းသည် သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုသော သီးခြားဗီဒီယိုကိုသာမက သင့်ဒေသအတွင်း ကျင့်သုံးသည့် မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများအပေါ်လည်း မူတည်ပါသည်။ YouTube ၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ၎င်း၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် မူပိုင်ခွင့်ရထားသော ဗီဒီယိုများကို ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းကို တားမြစ်ထားသည်။ သို့သော် ဗီဒီယိုအများအပြားကို “fair use” အယူဝါဒအောက်တွင် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်၏စမတ်ဖုန်းတွင် YouTube သို့ MP3 converter ကို သုံးနိုင်ပါသလား။
YouTube to MP3 Converter သည် PC (Windows၊ Mac၊ Ubuntu) ��ှင့် မိုဘိုင်းလ်လည်ပတ်မှုစနစ်များ (iPhone၊ Android) နှစ်ခုလုံးရှိ နာမည်ကြီးဘရောက်ဆာများအားလုံးနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ YouTube ဗီဒီယိုကို MP3 သို့ ထိရောက်စွာပြောင်းရန်၊ သင့်ဘရောက်ဆာ၏ နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို ရယူရန် သင့်စနစ်အား အပ်ဒိတ်လုပ်ရန်လိုပါမည်။
YouTube ဗီဒီယိုများကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အကောင့်တစ်ခု လိုအပ်ပါသလား?
ကျွန်ုပ်တို့ လောလောဆယ် မလိုအပ်ပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးမပြုမီ သုံးစွဲသူအသစ်များ အကောင့်တစ်ခု မှတ်ပုံတင်ရန်။
< h3 class='text-justify'>ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် အသံနှင့် ဗီဒီယိုဖိုင်များကို မဒေါင်းလုဒ်မလုပ်မီ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများကို သေချာစွာဖတ်ရှုသင့်ပါသည်။ အဓိကအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့် သင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသောဖိုင်များကို အသုံးပြုမှုအတွက် သင်သာ တာဝန်ရှိပါသည်။